“प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ देखेर म यति खुसी भएँ कि प्रश्नोत्तर सोध्नै बिर्सेछु । अरु साथीहरुलाई पनि त्यही परेछ । सभामुखले नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरको समय त पक्कै दिनुभएको थियो । सभामुखले नियमावली मिच्नुहुन्न, मलाई विश्वास छ । म भिडियो रेकर्ड पनि चेक गर्दिनँ,” उनले भने ।
त्यस्तै, उनले सरकार सञ्चालनको परीक्षामा प्रधानमन्त्री असफल भएको पनि दाबी गरे । सरकारले संसदसँग गरेको कार्यसम्पादन करार पूरा गर्न नसकेको उनको जिकिर थियो । बजेट कार्यान्वयन सरकारले संसदसँग गरेको कार्यसम्पादन भएको र त्यो पूरा हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्री शासन सञ्चालनको परीक्षामा असफल भएको उनले तर्क गरे ।
“प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले मन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन करारका बारेमा त औला उठाउनुहोला, मन्त्री फेर्नुहोला । तर जनताले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन करार खै ? हिजो जनताले निर्वाचनमा गरेको कार्यसम्पादन करार पूरा भएन प्रधानमन्त्रीज्यू,” रिजालले भने । एक वर्षमै पानीजहाज र रेलको सपना देखाउने सरकार तिथिमिति तोकेर सत्तापक्षले निम्ता गरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले भने आधार वर्ष भनेर आर्थिक वृद्धिको बारेमा हल्का टिप्पणी नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए ।
लोकतन्त्रका लागि सरकार नलडेको र प्रजातन्त्रका लागि लडेकाहरुले सरकार बनाएको भन्दै उनले एक पल्टको लडाइँले जीवनभरी जे पनि गर्न अनुमति नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अर्को चुनाव नभएसम्म सरकार नफेरिने भन्दै सडकमा सरकार उल्टाउने सपन नदेख्न गरेको आग्रहका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै सांसद रिजालले अर्को चुनावपछि कांग्रेसको सरकार बन्ने दाबी गरे । “प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– अर्को चुनाव नभएसम्म यही सरकार रहन्छ । ठिक हो प्रधानमन्त्रीज्यू । यस्तो काम देखेपछि त अर्कोपल्ट कांग्रेस बाहेक अरु कसको सरकार बन्छ ? यसपल्ट त यही सरकारभन्दा तरंग सत्तामा गयो गएन मलाई थाहा छैन । शुभकामना छ, सत्ताभित्रै कोही तरंगित नभएको होस्,” उनले भने ।